ओली–प्रचण्ड मुकुण्डोधारी कम्युनिस्ट हुन्: सीपी गजुरेल - Nepal's Digital News Paper
ओली–प्रचण्ड मुकुण्डोधारी कम्युनिस्ट हुन्: सीपी गजुरेल
काठमाडौँ । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका संयोजक सिपी गजुरेलले ओली-प्रचण्ड भूतपूर्व कम्युनिस्ट भएको दावी गरेका छन् । सरकारले तत्काल माथिल्लो कर्णाली परियोजना खारेजीको घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै राजधानीमा आयोजना गरिएका कार्यक्रममा उनले सत्तारुढ नेकपालाई कम्युनिष्ट भन्न नमिल्नेसमेत बताएका हुन् ।
‘ओली–प्रचण्ड भूतपुर्व कम्युनिस्ट थिए, अहिले होइनन् । तिनीहरु कम्युनिस्टलाई सिध्याउन तयार भएका कम्युनिस्टको मुकुण्डोधारी हुन,’ उनले भने, ‘अहिलेको सत्ताधारी पार्टी काँग्रेसभन्दा के कुरामा फरक छ ? केहीमा पनि फरक छैन, अनि त्यसलाई हामीले किन कम्युनिस्ट मान्नु ?
माथिल्लो कर्णाली परियोजना खारेजीको माग गर्दै विभिन्न घटकहरुले गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा गजुरेलले भने,‘ भदौ ३१ हामीले कागजमात्रै होईन, पिडीए जलाउने भनेका छौं । यत्ति गर्दापनि यीनीहरुले यो परियोजनालाई रिन्यु गरे भने यो परियोजना हामी बन्न नै दिँदैनौं ।’ उक्त परियोजनाको अहिले नेपाली सेनाले सुरक्षा दिईरहेको सुनाउँदै आफूहरुले राष्ट्रघात हुन नदिने पनि गजुरेलले स्पष्ट पारे ।
यो परियोजनामा ९६ अर्ब फाजील देखाएर जिएमआरले सबै नेपाली नेताहरुलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाउने काम गरेको पनि उनको आरोप थियो । उनले भने, ‘यो ९६ अर्ब नेपालका नेताहरुको हातमा गएको छ । नेपालमा कहिल्यै पनि भ्रष्टाचारको स्केल यति हुँदैन थियो । उनीहरुले देशै बिक्रि गरिदिए ।’
संयुक्त रुपमा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नेपालको राष्ट्रिय हितविपरितको यो संझौता आफैं खारेज भैसकेर पनि खारेज भएको घोषणा नगर्नु गम्भीर राष्ट्रघात पनि हो ।’
२ वर्षभित्र वित्तिय व्यवस्थापन गरी काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा हालसम्म पनि परियोजनासम्वन्धी कुनै काम अघि नबढाउनुले उक्त कम्पनीसँग नेपाल सरकारले गरेको संझौता स्वतः खारेज भैसकेको उनीहरुको ठम्याई छ ।